अफशोर कम्पनी गठन प्रकार, लाभ, निगमनको लागत
शीर्ष सिफारिश अफशोर कम्पनी न्याय क्षेत्र
तल अफशोर कम्पनी न्याय क्षेत्र हो कि सम्पत्ति सुरक्षा, मुद्दा संरक्षण र गोपनीयता को एक संयोजन प्रदान गर्दछ। तपाईं पनि हेर्न सक्नुहुन्छ तुलना चार्ट यस लिंकमा क्लिक गरेर अफशोर LLC हरूको लागि।
नेविस - गोपनीयता, सुविधा र स्थिरता। जान्नुहोस् किन नेभिस टापु आज एक सबैभन्दा लोकप्रिय क्षेत्र हो। सबैभन्दा माथि, सबैभन्दा शक्तिशाली अफशोर उपकरण जाँच गर्नुहोस्: the नेविस एलएलसी.
बेलिज - कम्पनीहरू, IBC (अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार कम्पनी) र बैंकिंग। थप रूपमा, तपाईले देख्नुहुनेछ कि बेलीजले अफशोर ईन्कोपोर्ट विकल्पहरूको विस्तृत विविधता प्रदान गर्दछ। उदाहरण को लागी, बेलिज एलडीसी, बेलिजको LLC को विकल्पले केहि अद्वितीय सम्पत्ति सुरक्षा लाभ प्रदान गर्दछ।
बहामास - कर निःशुल्क, गोपनीयता र कम शुल्क। थपको रूपमा, तपाईं बहामासमा तपाईंलाई उपलब्ध विकल्पहरूको विविधताका बारे पढ्न सक्नुहुन्छ।
ब्रिटिश भर्जिन टापुहरू - अधिकतम सुरक्षा, सम्पत्ति संरक्षण र गोपनीयता। यसका साथै, तपाईं अनुसन्धान गर्न सक्नुहुनेछ कि कसरी BVI मा अपतटीय कम्पनीहरू र IBC को तपाईंको सम्पत्ति बचाउन मद्दत गर्दछ।
पूर्ण सूचीको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्: अफशोर कम्पनी न्याय क्षेत्र.
अपतटीय कम्पनी जानकारी
अफशोर कम्पनीहरू संस्थानहरू जस्तै कर्पोरेसनहरू वा सीमित देयता कम्पनीहरू (LLCs) हुन् कसैको निवासको देश बाहिर फाइल। मानिस जसले कम्पनी अफशोरमा सम्मिलित गर्छन् अन्य चीजहरूको बीचमा, जब सम्पत्ति सुरक्षा, व्यवसाय विस्तार र वित्तीय गोपनीयतामा रुचि राख्छन्। थप रूपमा, तल दिइएको जानकारी सारांश गर्दछ किन व्यक्तिहरू यी संस्थाहरू बनाउँछन्:
कर बचत (तपाईको कार्यक्षेत्रमा निर्भर गर्दै)
लचिलो व्यापार कानून
अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय विविधता
अफशोर कम्पनी गठन रणनीतिहरू
यहाँ, तपाईं धेरै अपतटीयको सूची देख्नुहुनेछ सम्पत्ति सुरक्षा रणनीतिहरू, तिनीहरूको लागत र लाभहरू। थप रूपमा, यो खण्डले अपतटीय योजनाको आवश्यक पक्षहरूको बारेमा छलफल गर्दछ, जसमा कम्पनीहरू, अफशोर बैंकि and र ट्रस्टहरू, कसरी तिनीहरू संरचित छन् र किन। अझ महत्त्वपूर्ण कुरा, हामी प्रत्येक कम्पनीको लागि कर्पोरेट बैंक खाता स्थापना गर्न सक्छौं जुन तपाईं हाम्रो सेवा मार्फत स्थापना गर्नुहुन्छ। यसबाहेक, तपाईं सक्नुहुन्छ बारेमा सिक्नुहोस् अपतटीय बैंकिंग यहाँ।
पहिलो, धेरै अपतटीय क्षेत्राधिकार सम्पत्ति सुरक्षा र वित्तीय गोपनीयता खोज्नेहरूको लागि असाधारण लाभदायक कानुनी प्रणालीहरू छन्। यी विचार गर्नुहोस् अपतटीय कम्पनी गठन लाभ र तथ्यहरु। विशेष गरी, यो अमेरिकासँग विश्वको जनसंख्याको 4.4..70% छ, अझै विश्वव्यापी 96०% र विश्वव्यापी मुद्दाको XNUMX%% छ। यस बाहेक, संसारका अन्य देशहरू जस्तो, हामीसँग हारेको कानूनी प्रणाली छैन। यसको विपरित, अन्य देशहरूमा मुद्दा हाल्ने व्यक्तिले उसको वकील शुल्क र विपक्षी दुबै तिर्नु पर्छ। फलस्वरूप, तिनीहरूको कानूनले मुद्दा कम धेरै कम बनाउँछ।
अफशोर कम्पनी = Alligators को साथ खाई
अमेरिकामा यदि तपाईं एक मुद्दामा मिल्नुभयो र जित गर्नुभयो भने, तपाईं अझै आफ्नो कानुनी खर्च बाहिर हुनुहुन्छ, त्यसैले तपाईं अझै हराउनुहुन्छ। अर्कोतर्फ, एक अफशो कम्पनीमा मुद्दा हाल्ने काम धेरै गाह्रो छ। उदाहरण को लागी, मानौं एक कानूनी विपक्षी तपाइँको अपतटीय कम्पनी मा मुद्दा दायर गर्न छान्नुभयो। उसले वा त्यो एक समीक्षा बोर्ड मार्फत पठाएको मामलामा पोष्ट पोस्ट गर्नुपर्दछ। तिनीहरू, बारीमा, निर्धारण गर्दछ कि त्यो केस अदालतमा पनि राख्छ कि हुँदैन। अक्सर, बन्धन फिर्ती योग्य हुँदैन। नतिजाको रूपमा, धेरै व्यक्तिले मुद्दा दायर गर्दैनन्। त्यसोभए, यो मुद्दा संरक्षणको एक मजबूत तह हो। अर्को शब्दमा, केवल एक अपतटीय क्षेत्राधिकार कानूनी कानूनको फाइदा लिई तपाईं नाटकीय रूपमा तपाईं मुद्दा दायर को बाधा कम।
संग एक नेविस LLCउदाहरण को लागी २०१ 2015 संशोधन एक itor 100,000 बॉन्ड पोस्ट गर्न एक लेनदेनकर्ता बनायो उनीहरूले कुनै निर्णय ल्याउन अघि कुनै कार्य ल्याउन अघि एक सदस्य कम्पनीको बिरूद्ध। नेभिसका सांसदहरूले २०१ 2018 मा नियमहरू सुधार गरे जसले नेभिस अदालतलाई theणपत्र सेट गर्ने अधिकार दिए कुनै रकम। तपाईंको पैसालाई प्रियक आँखाबाट टाढा राखेर बचत गरिएको पैसा, यसैले मुद्दा चलाउन रोक्ने, मुद्दा चलाउनबाट तपाईंको सम्पत्ति जोगाउने र बढ्दो वित्तीय गोपनीयता अपतटीय हुनुको थुप्रै कारणहरू हुन्। LLC हरूको लागि अर्को अनुकूल क्षेत्र कुक टापुहरू हो। संयोगवश, तपाईं मा यो लेख पढ्न सक्नुहुन्छ नेविस एलएलसी बनाम कुक टापुहरू एलएलसी त्यो दुई संस्थालाई तुलना गर्दछ।
अफशोर कम्पनीहरूका प्रकारहरू
अर्को मुख्य कुरा यो हो अफशोर कम्पनीहरूले धेरै अधिक आर्थिक गोपनीयता प्रदान गर्दछ घरेलु इकाई भन्दा प्रकारहरू। यसको उदाहरणहरू कर्पोरेसनहरू, सीमित देयता कम्पनीहरू वा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार कम्पनीहरू (IBCs) समावेश गर्दछ। त्यहाँ धेरै अपतटीय क्षेत्राधिकारहरू छन् कि अधिक अनुकूल कानूनहरू जुन अमेरिका, क्यानडा वा बेलायत। यी न्याय क्षेत्र अन्तर्राष्ट्रिय ग्राहकहरूको लागि प्रतिस्पर्धा। नतिजा स्वरूप, उनीहरूको कानून स्वामित्वको गोपनीयता, अफिसरहरू र निर्देशकहरूको लागि गोपनीयता र विदेशीलाई मान्यता नदिनुहोस् निर्णय.
देख्न सकिन्छ, अमेरिकी व्यापार मालिकलाई हडताल गर्ने मुद्दा मुद्दाको नतीजा बढी छ। सबै पछि, धेरै वकिलहरू केवल बाँच्नको लागि अभियोग लगाउँछन्। वास्तवमा केहीले कहिले पनि अदालत कोठाको भित्री भाग देख्दैनन्। त्यो हो कि तिनीहरू कानुनी प्रणाली प्रयोग गर्छन् व्यापारी नेताहरूलाई अनुचित बस्तीमा दबाब दिन। तपाईं कसरी अपतटीय कम्पनीको बारेमा अधिक जान्न सक्नुहुन्छ सम्बद्धता द्वारा तपाईंको सुरक्षा आवश्यकताहरूलाई मद्दत गर्न सक्दछ OffshoreCompany.com वा कल गर्दै by यस पृष्ठमा फाराम पूरा गर्दै। हामी गठन गर्दछौं प्रत्येक वर्ष हजारौं व्यापार संरचना, हजारौं अमेरिकीहरूलाई उनीहरूको सुरक्षा र गोपनीयता आवश्यकताको साथ मद्दत गर्दै र अफशोर कम्पनीका सबै मार्फत मार्गदर्शन प्रदान गर्दै औपचारिकता.
अन्तिम अपडेट १ June जून, २०२०